GED ®အရင်းအမြစ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက် | USAHello ပညာရေး | USAHello
တစ်ဦးကGED®လက်မှတ်အထွေထွေပညာရေးဒီပလိုမာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်အထက်တန်းကျောင်း-Level ဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည်ပြသသောစမ်းသပ်မှုများအစုတခုဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးGED®အထောက်အထားများထားရှိခြင်းသည်သင်အလုပ်ရကူညီပေးနိုင်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
TASC က Secondary ပြီးစီးအကဲဖြတ်စမ်းသပ်ခြင်းအတိုကောက်. အဆိုပါ TASC စမ်းသပ်မှုGED®စမ်းသပ်မှုနှင့်ဆင်တူသည်. စမ်းသပ်ဖြတ်သန်းပြီးနောက် TASC လက်မှတ်လက်ခံခြင်းကိုသင်အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်ကိုဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည်ပြသထားတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်ဦးက HiSET သင်အထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့ပြီမဟုတ်လျှင်သင်က high-ကျောင်းအဆင့်အသိပညာများပြသသော USA တွင်သုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာGED®ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆင်တူပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ကြှနျတေျာ့အိပျမကျဆရာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အချို့နိုင်ငံများရှိ, အမျိုးသမီးကောလိပ်ပညာရေးရဖို့အတှကျကခက်ခဲသည်. USA တွင်ဆရာဖြစ်ခြင်းသူမရဲ့အိပ်မက်လိုက်စားအကြောင်းကိုတစ်ဦးကမျက်နှာသစ်ဆွေးနွေးပွဲ